Wararka - Kooxda Brocade ayaa soo bandhigtay Carwada Shiinaha iyo Bartamaha iyo Bariga Yurub Carwada Carwada iyo Ganacsiga iyo Chengdu Special Cloud Fair
Bishii Oktoobar 28-keedii, Chengdu wuxuu si guul leh u qabtay Carwada Shiinaha iyo Bartamaha iyo Bariga Yurub Carwada Carwada iyo Ganacsiga Chengdu iyo Carwada Gaarka ah ee Chengdu. Dhacdadani waa qayb muhiim ah oo ka mid ah Bandhigyada Dijital ah ee Ganacsiga Caalamiga ah ee Shiinaha iyo Yurub 2020-ka. Liu Xiaoliu, Kuxigeenka Duqa Dowlada Hoose ee Chengdu iyo hogaamiyaasha la xiriira, Hogaamiyaasha iyo kooxda Golaha Shiinaha ee Dhiirigelinta Ganacsiga Caalamiga, safiirka wafdiga EU ee Shiinaha, wakiilada shirkadaha ganacsiga dhijitaalka ee Chengdu Brocade Artificial Intelligence Group iyo Aotai Caafimaadka ayaa kaqeybgalay xafladii furitaanka bandhiga. Qabashada carwadan ayaa muujisay sida ay muhiimka u tahay iskaashiga dhaqaale iyo ganacsi ee u dhexeeya Chengdu iyo Yurub xilligii cudurka faafa, waxayna sidoo kale ku dhalisay dardar cusub wadashaqeyn qoto dheer oo udhaxeysa Chengdu iyo Yurub.
Dr. Guo Sha, gudoomiyaha kooxda Brocade Artificial Intelligence Group, Marwo Hao Fang, madaxweynaha, iyo kooxda kaalmada elektaroonigga ah ee ganacsiga caalamiga ah ayaa ka qayb galay kulanka, ka hor kulanka, waxay ka qaybgaleen kulanka ay la yeesheen madaxda Dawladda Hoose ee Chengdu, Xarunta Ganacsiga Caalamiga ee Qaramada Midoobay, waaxaha dawladda Shiinaha iyo Badhtamaha iyo Bariga Yurub, ururada ganacsiga iyo wakiillada shirkaddu waxay yeesheen is-dhaafsi saaxiibtinimo.
Chen Jian'an, gudoomiye kuxigeenka Golaha Shiinaha ee Dhiirrigalinta Ganacsiga Caalamiga ah, ayaa kaqeybgalay xafladda furitaanka wuxuuna khudbad ka jeediyay fiidiyoow. Khudbadiisa, Chen Jianan wuxuu mahadcelin kal iyo laab ah u muujiyay cutubyada ay khuseyso ee Golaha Shiinaha ee Dhiirrigelinta Ganacsiga Caalamiga ah iyo Rugta Ganacsiga Caalamiga ah ee Shiinaha oo ay ka heleen taageero xoog leh iyo ka qeybgal firfircoon. Bandhigga ayaa loo qabtay xuska sanad-guurada 45-aad ee aasaaskii xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Shiinaha iyo Midowga Yurub iyo kor u qaadista horumarka Chengdu iyo dalalka Bartamaha iyo Bariga Yurub.
Liu Xiaoliu, Kuxigeenka Duqa Magaalada Dowlada Chengdu ee Dowlada Hoose, ayaa u soo bandhigay horumarka degdega ah ee Chengdu martida Shiinaha iyo kuwa ajaanibta ah si daacad ah carwada. Waxay sheegtay in Chengdu ay tahay mid muhiim u ah dhaqaalaha qaranka, tikniyoolajiyadda, maaliyadda, dhaqanka iyo hal abuurka, sarrifka lacagaha qalaad iyo is-dhexgalka caalamiga ah ee ay aqoonsadeen Golaha Gobolka. Xarunta dhexe, oo leh baarkinka iyo barxadda sida side, waxay soo bandhigtaa mashaariic maalgashi sida dhaqaalaha dhijitaalka ah, waxbarashada STEAM, saldhigga tijaabada ee hal abuurka sayniska iyo farsamada, dalxiiska dhaqanka, iyo teknolojiyada sare. Chengdu wuxuu si kal iyo laab ah u rajeynayaa in ganacsatada adduunka oo idil ay si firfircoon u raadsadaan fursadaha iskaashi ee Chengdu dhinacyada wax soo saarka caqliga leh, tamarta cagaaran, qalabka caafimaadka, abuurka dhaqanka dhijitaalka ah, iyo saadka caalamiga ah, ayna raadiyaan horumarinta ganacsiga guud iyo horumarka magaalooyinka.
Intaa ka dib, Safiirka Midowga Yurub ee Shiinaha, Yu Bai, wuxuu sheegay in Shiinaha uu dhaafay Mareykanka si uu u noqdo saaxiibka ugu weyn ee ganacsiga ee Midowga Yurub markii ugu horreysay tan iyo 2020. Shiinaha iyo dalalka Bartamaha iyo Bariga Yurub waxay leeyihiin Faa'iidooyinka, is-waafajin xoog leh iyo rajo ballaadhan oo iskaashi. Carwada Shiinaha iyo Bartamaha iyo Bariga Yurub ee Carwada Daruuraha Dhaqaalaha iyo Ganacsiga, oo uu ansaxiyay Golaha Gobolku isla markaana ay soo qabanqaabiyeen Golaha Dhiirrigelinta Ganacsiga Caalamiga ah, ayaa waxay heshay tixgelin iyo aqoonsi ballaadhan oo ka timid ganacsatada caalamiga ah. Maaddaama ay tahay wehelka ugu weyn ee ganacsiga Chengdu, Yurub waxay rajeyneysaa in shirkadaha labada dhinacba ay ka faa'iideysan doonaan "iskaashiga 17 + 1" si ay si buuxda u taabtaan suurtagalnimada suuqa weyn ee "Belt and Road". Abuur jawi caalami ah oo dhaqaale iyo ganacsi, ku soo biir dhacdada weyn isla markaana raadso iskaashi.
Isla mar ahaantaana, Bandhigga Dijital ah ee Ganacsiga Caalamiga ah ee Shiinaha ee 2020 Shiinaha ayaa sidoo kale bilaabay isla maalintaas. 1,200 oo shirkado Shiineys ah iyo 12,000 oo xirfadlayaal ah oo soo booqday oo ka socda Yurub ayaa ka qeyb geli doona bandhiggan khadka tooska ah. 60 Shirkadaha Chengdu oo ka socda qaybaha wax soo saarka casriga ah, tamarta cagaaran, dhaqanka dhijitaalka ah iyo hal abuurka, qalabka caafimaadka, saadka, iwm ayaa ka soo muuqday barxadda bandhigga dhijitaalka ah ee Golaha Shiinaha ee Dhiirrigelinta Ganacsiga Caalamiga ah. Kooxda Brocade waxay sii sii bandhigtay bandhigan daruuriga ah iyada oo loo marayo STEAM waxbarashada caqliga leh, alaabada elektaroonigga ah ee maqalka iyo muuqaalka sare leh, goobaha dhijitaalka ah iyo qaybaha kale. Wareysiga, Dr. Guo Sha wuxuu ku sheegay in kaqeybgalka Brocade Group ee carwada looga gol leeyahay in lagu hormariyo horumarka dhaqaalaha dhijitaalka ee Chengdu iyo iskaashiga ganacsi ee dhoofinta wax soo saarka elektaroonigga ah.
Khudbadiisa, Lu Yiji, gudoomiyaha Ururka Digital, wuxuu ku sheegay in dhaqaalaha dhijitaalka ah uu si tartiib tartiib ah u dhex galay maalgashiga iyo ganacsiga. Shiinaha waa suuqa ugu weyn adduunka marka loo eego mugga ganacsigiisa, wuxuuna gaaray US $ 600 milyan qeybtii hore ee sanadkan, wuxuuna ka sarre maray Mareykanka, Ingiriiska, Japan iyo dalal kale. Wadaxaajoodyada khadka tooska ah ee Ganacsiga, dukaamaysiga, iyo baahinta tooska ah ee tooska ah ayaa noqday isbedelo caan ah. Tikniyoolajiyadda dijitaalka ahi waxay keentaa isbeddelka warshadaha waxayna kobcisaa qaababka cusub ee ganacsiga. Waa hub wuxuuna noqon doonaa isbeddel mustaqbal oo waxtar u leh dadka adduunka.
Carwada waxaa martigeliyay Golaha Shiinaha ee Dhiirigelinta Ganacsiga Caalamiga ah iyo Dowladda Hoose ee Dadweynaha Chengdu, waxaana martigaliyay Rugta Ganacsiga Shiinaha, Golaha Shiinaha ee Dhiirrigelinta Ganacsiga Caalamiga ah (Shiinaha Rugta Caalamiga ah ee Dhiirrigelinta ganacsiga iyo maalgashiga Yurubta ayaa gaadhay heer cusub.